﻿ बहाल करको विवाद किन ? कसरी गर्ने समाधान ?
- सिए शेषमणि दाहाल
मङ्गलबार १४, जेठ २०७६
केही समय अघिसम्म घरभाडा भूक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र प्रचलन दुबै थियो। हाल, कानुन र निर्देशनमा आएको परिवर्तनका कारण अहिले करदाता अलमलमा परेका छन् । त्यस्तै, कानुनी अस्पष्टताका कारण करदाताले कसरी सास्ती भोगिरहेका छन् र त्यसको बैज्ञानिक समाधान के हुन सक्छ भन्ने बारेमा यस लेख केन्द्रीत छ ।
बहालको विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?
हुनतः नेपालको संविधान जारी हुनु अगाडिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन( २०५४ तथा नियमावली अनुसार त्यसवेलाका स्थानीय तहले आयकर अनुसारको १० प्रतिशत करका अतिरिक्त बहाल रकमको २ प्रतिशत कर उठाउँदै आएका थिए र त्यो कानूनसम्मत पनि थियो। भलै, व्यवहारमा स्थानीय सरकारमा दर्ता हुन जाने व्यवसायबाट मात्र यो कर स्थानीय सरकारले उठाउन सकेका थिए। अन्यथा यो व्यवस्था कानूनमा मात्र सीमित थियो।
संविधानले “घर बहाल” स्थानीय सरकारको अधिकार भने पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन(२०७४ को दफा ५७ अनुसार “गाँउपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्यो।
नयाँ संशोधन अनुसार “भाडा” को परिभाषाभित्र एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल वापत प्राप्त गरेको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि भाडा नमानिने व्यवस्था गरियो। यसले थप के प्रष्ट पार्यो भने यदि कुनै एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्ति (अर्थात मान्छे) ले घर बहाल बापत कुनै आय प्राप्त गर्छ भने त्यो आयलाई आयकर प्रयोजनको लागि भाडा नमानिने स्पष्ट भयो। त्यसो भए के मान्ने त ? यस्तो भाडा आम्दानीलाई आयकर ऐनको दायरा भन्दा बाहिर राखियो, त्यसकारण त्यो आम्दानीमा अब उपरान्त आयकर नलाग्ने भयो।
के सबै बहाल कर स्थानीय तहमै बुझाउने हो ?
आयकर ऐन हेर्दा, यदि घरधनी प्राकृतिक व्यक्ति (मान्छे) छ भने मात्र त्यो बहालकर स्थानीय तहमा बुझाउने हो। यदि तपाईले घर भाडा बाहेकका अन्य सम्पत्ति जस्तै जग्गा, पोखरी, सवारी भाडा जोसुकैसँग भाडामा लिनुभएको छ भने त्यसको कर आयकर ऐन अनुसार नै आकर्षित हुन्छ र पहिले जस्तै गरी व्यवहार गर्नुपर्छ। तर, यदि तपाईले घरभाडा निकाय (कम्पनी, सहकारी, संघ, संस्था) सँग लिनुभएको छ भने, आयकर ऐन अनुसार नै टिडिएस कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। यिनीहरुको हकमा आयकर कानुनमा कुनै संशोधन भएकै छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा स्थानीय सरकारको ऐनहरु हेर्दा जुनसुकै किसिमका भाडा आम्दानीमा पनि स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐन आकर्षित हुने गरी बनाएका छन् । र, कर खोजिरहेका छन् जुनमाथि नै व्याख्या गरि सकियो। यस्तो अवस्थामा कि स्थानीय सरकार कि संघिय सरकार पछाडि हट्नु पर्यो वा करदाताले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजालासमा मुद्दा हाल्नुपर्यो अन्यथा बहालको विवादले कुनै निष्कर्षमा पुर्याउला जस्तो लाग्दैन।
घरभाडा करको बैज्ञानिक समाधान कसरी ?
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिईसकेपछि संविधान संशोधन विना त्यो अधिकार फिर्ता ल्याउन सकिँदैन र त्यो काम त्यति सहज पनि नहोला। त्यसकारण, संघिय सरकारसँग रहेको पुरानो अनुभव, स्रोत तथा जनशक्ति लगाएर स्थानीय तहलाई घरभाडा कर उठाउन किन सहजीकरण नगर्ने त ?
छिमेकी राष्ट्र भारत पनि विभिन्न करबाट आजित भएर एउटै कर जिएसटीमा परिवर्तन गरियो। जिएसटीमार्फत संघिय सरकारले उठाएर बाँडफाड गर्दा व्यवसाय गर्न सहज बन्यो। नेपालमा पनि हालको समस्याको समाधानको रुपमा घरभाडा भूक्तानी गर्दा टिडिएस कट्टा गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई पुनःजिवित गर्दै त्यसरी उठेको कर संघिय सरकारले नै उठाएर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरेमा करदातालाई सहज हुन्थ्यो। स्थानीय तहमा चुहावट भईरहेको कर राम्रोसँग उठाउन सके आर्थिक स्रोतमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।
(लेखक “द पर्पल बुक अफ ट्याक्स” का लेखक तथा नेपाल ट्याक्स अनलाईनका सल्लाहकार हुन् ।)